Aimbova mudiwa ane kodzero yekuchengetwa haadi kushanda | Law & More
Blog » Aimbova mudiwa ane kodzero yekuchengetedza haadi kushanda
Aimbova mudiwa ane kodzero yekuchengetedza haadi kushanda
MuNetherlands, kuchengetedza imupiro wemari kumari yekugara yewaimbove mudiwa uye chero vana mushure mekurambana. Imari yaunogamuchira kana yaunofanira kubhadhara pamwedzi. Kana iwe usina mari yakakwana yekuzviriritira, une kodzero yekupihwa mari. Kana iwe uine mari inokwana kuzviriritira asi wako wawaimbova naye asina, ungangodikanwa kubhadhara mari yemendenenzi. Chimiro chehupenyu panguva yemuchato chinotarisirwa. Mubairo werutsigiro rwemurume kana mukadzi rwakavakirwa pakushaiwa kwebato rine kodzero uye kugona kwemari kune anosungirwa bato. Mukuita, izvi zvinowanzo kuve nyaya yekukurukurirana pakati pemapato. Zvinogona kudaro kuti wako-wawakaroorana naye anoti alimony apo iye kana iye angave achinyatso kushanda ivo pachavo. Unogona kuona izvi zvisina kurongeka, asi chii chaungaite mune yakadai nyaya?
Kutsigira murume / mukadzi
Munhu ari kutsvaga rutsigiro rwemurume / mukadzi anofanira kugona kuratidza kuti haana kana mari yakakwana yekuzvitsigira uye kuti iye haakwanise kuburitsa mari iyoyo. Kana iwe uine kodzero yekutsigirwa nemurume / mukadzi, chinotanga ndechekuti iwe unofanirwa kuita zvese musimba rako kuti uzviriritire. Iri basa rinobva pamutemo uye zvakare inonzi chisungo chekuedza. Zvinoreva kuti aimbova mudiwa ane kodzero yekuwana mari anotarisirwa kutsvaga basa panguva yaanogamuchira rubatsiro.
Icho chisungo chekuita kuyedza inyaya yematare akawanda mukuita. Bato rinosungirwa kazhinji kazhinji rine pfungwa yekuti bato rine kodzero rinogona kushanda nekugadzira mari nenzira iyoyo. Mukuita kudaro, mubato unosungirwa kazhinji unotora chinzvimbo chekuti anenge achigamuchira anofanira kukwanisa kuwana mari inokwana kuzvitsigira. Kutsigira kwake kwemaonero, iwo anosungirwa bato anogona kuendesa humbowo, semuenzaniso, iyo dzidzo kosi (s) inoteverwa neanogamuchira uye anowanikwa mabasa. Nenzira iyi, mubato unosungirwa unoedza kujekesa kuti hapana gadziriso inofanirwa kubhadharwa, kana zvirinani zvishoma sezvinobvira.
Izvi zvinotevera kubva kumutemo wenyaya kuti chisungo chemukweretesi wekuchengetedza kuti aedze kutsvaga basa hachifanirwe kutorwa zvishoma. Mukweretesi wekuchengetedza anofanirwa kuratidza nekusimbisa kuti iye aedza zvakakwana kuti awane (yakawanda) mari yekuwana. Nekudaro, mukweretesi wezvekuchengetedza anofanirwa kuratidza kuti iye anoshaiwa. Izvo zvinorehwa ne 'kuratidza' uye 'kugadzira zvakakwana' kuedza kunoongororwa mukuita pane imwe nyaya.
Mune zvimwe zviitiko, mukweretesi wekuchengetedza haakwanise kubatwa kune ichi chisungo chekuedza. Izvi zvinogona kubvumiranwa muchibvumirano chekurambana, semuenzaniso. Iwe unogona zvakare kufunga nezvemamiriro ezvinhu anotevera akamuka mukuita: mapato akarambana uye murume anofanira kubhadhara shamwari uye mwana rubatsiro. Mushure memakore manomwe, anokumbira dare kuti ribvise mari, nekuti anofunga kuti mukadzi anofanirwa kuzvitsigira parizvino. Pakunzwikwa kwaitaridza kuti vaviri ava vaive vabvumirana panguva yekurambana kuti mukadzi achengete vana zuva nezuva. Vese vana vaive nematambudziko akaomarara uye vaida kuchengetwa zvakanyanya. Mukadzi uyu aishanda anosvika maawa gumi nematatu pavhiki semushandi wenguva pfupi. Sezvo aive neruzivo rushoma pabasa, pamwe nekuda kwekuchengetwa kwevana, zvaisave nyore kwaari kuti awane basa rekusingaperi. Mari yake yazvino yaive saka yaive pazasi peiyo rubatsiro rwemagariro. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, mukadzi aisakwanisa kudiwa kuti azadzikise zvizere chisungo chake chekuita nesimba uye kuwedzera basa rake kuti asazovimbe nerutsigiro rwemurume / mukadzi.
Muenzaniso uri pamusoro uyu unoratidza kuti zvakakosha kune anosungirwa bato kuti atarise kana iye ari kugamuchira ari kuzadzisa chisungo chake chekuedza kuita mari. Kana humbowo hukaratidza kupesana kana paine chero fungidziro yekuti chisungo chekuwana mari hachisi kuzadzikiswa, zvingave zvakanaka kune anosungirwa kutanga matanho epamutemo kuitira kuti chisungo chekuchengetedza chiongororwe zvakare. Magweta edu emhuri ane ruzivo achafara kukuzivisa iwe nezve chinzvimbo chako uye nekukubatsira iwe munzira dzakadai.
Iwe une mibvunzo nezve alimony kana iwe unoshuvira kunyorera, chinja kana kumisa alimony? Wobva wabatana nemagweta emhuri ku Law & More. Magweta edu ane hunyanzvi mu (re) kuverenga alimony. Uye zvakare, isu tinogona kukubatsira iwe mukukwanisa kuitika kwekugadzirisa. Magweta pa Law & More Nyanzvi mune zvemutemo wega uye zvemhuri uye vanofara kukutungamira nenzira iyi, pamwe pamwe nemumwe wako.
Previous Post Ndeapi kodzero dzako semaroja?